Hiran State - News: Gudiga doorashooyinka baarlamaanka Somaliya oo sheegay iney diyaariyeen kaararkii musharaxiinta.
Gudiga doorashooyinka baarlamaanka Somaliya oo sheegay iney diyaariyeen kaararkii musharaxiinta.
Muqdisho: - Gudiga doorashada barlamanka Soomaaliya ee loo xil saaray iney soo qaban qaabiyaan doosharada soo socota ayaa sheegay inay diyaariyeen kaararkii looga qeyb gali lahaa doorashooyinka Madaxtinimo ee dalka Soomaaliya iyadoo musharaxiinta iyo mudanayasha baarlamaanka la siin doono dhawr isbuuc kedib.
Gudiyadani doorashayoonka iyo dib u habaynta barlamaanka Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay Magaalada Muqdisho ayaa waxaa ay sheegeen in howlaha la xiriira diyaar garowga ololaha doorashada Madaxtinimada dalka inay u marayso meel wanaagsan, iyagoo xusay in goordhow ay soo gaba gabayn doonaan howlahaasi si ay musharaxiinta u tartameysa jagada madaxweynaha, gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku xigeenadiisa u helaan waqti ku filan oo ay ku soo gali karaan magaalada Mogdisho oo ah magaalada marti galin doonta doorashadan soo socota.
Mar uu la hadlayey xogheynta gudiga doorashooyinka Xildhibaan Ibraahim Buule qaar ka mid ah warbaahinta Mogdihso ayaa waxaa uu tilmaamay in go’aanka kama dambeysta ah ee gudiyada barlamanka goor dhow lasoo gaba gabayn doono, isagoo shaaca ka qaaday in haatan ay diyaarinayaan Kaararkii looga qayb qaadan lahaa doorashooyinka lagu wado in Magaalada Muqdisho ay ka dhacdo horaanta bisha 8aad.
Marka laga soo tago in ay doorashada soo socota dhaceyso waqtigii loogu talo galay hadane magaalada Mogdisho ayaa lagu wadaa iney bilaha soo socda wax badan iska bedelaan dhinaca nadaafada iyadoo ay magaalada imaan doonan wafuud ka kala socota beesha caalamka iyo wadamada daneeya arimaha Somaliya. sidoo kale waxaa iyaguna qurbaha ka kala tagi doona Somali badan oo iyagu siyabo kala duwan ugu laaban doona dalkoodii hooyo kuwaasi oo u tagaya dano siyaasdeed halka ay kuwa kalena doonayaan iney mar uun arkaan Somaliya gudaheed oo ay doorasho ka dhaceyso.
Midowga Yurub ayaa ka codsaday wadamada ay dalka Somaliya ka joogaan ciidamada iney isbedel weyn ku sameeyaan ciidamadooda si ay Amisom iyo baarlamaanka Somaliya iskaka kaashadaan arimaha doorashada, arintaan oo ay durbaba ka jawaabeen dowlada Uganda oo saraakiisheeda ciidamda isbedel weyn ku sameysay. waxaa lagu soo waramayaa in aduunyada ay si weyn ula shaqeyneyso baarlamaanka Somaliya iyadoo la sugi doono nabadgalyada musharaxiinta u tartameysa hogaanka sare sida madaxweynaha, gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku xigeenadiisa.
Qaabka ay doorashadu u dhici doonto.
Waxaa la dooran doonaa bisha July gudoomiye baarlamaan iyo labadiisa ku xigeen.
Waxaa magalada Mogdisho laga doonayaa musharaxiinta iney xaadir ku noqdaan isla bisha july hadaanba Jun loo yeerin si 22/8/2011 uu hoganka dalka ula wareego madaxweyanaha cusub ee la dooran doono.
Waxaa magaalada Mogdisho inta ay doorashadu ka socota cirka, dhulka iyo Bada ka ilaalin doona ciidamo loo bixin doono huwanta oo iskugu jira reer Galbeed, Africa iyo tiro yar oo Somali ah.
Sida muuqata dalka Somaliya waxuu lugaha la galay isbedel siyasadeed waxeyna noqon doontaa hadii doorashadan ay u dhacdo sidii la rabay markii ugu horeysay mudo 21 sano ku dhawaad in ay Somaliya ka dhalato dowlad rasmi ah oo aan kumeel gaar aheyn si dhaqaalo badan oo dibada kaka xayiran loogu soo fasaxo wadankuna u noqdo wadan dib loo dhismo.
· admin on May 04 2011 13:47:07 · 0 Comments · 1888 Reads ·
14,584,276 unique visits